Guddoomiyaha Gobolka oo daah furay shirka wadatashiga arrimaha Barakacayaasha – Radio Daljir
Maarso 5, 2018 1:30 g 0
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa sheegay in hiigsiga Maamulka Gobolka ee sanadka 2022 uu yahay sidii dib u dajin buuxda loogu samayn lahaa dadka haatan barakacayaasha ku ah Caasimadda.
1. In la kor dhiyo dadaalka lagu wajahyo xaaladaha adage e ay ku jiraan barakacayaashu, gaar ahaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada.
2. Magacaabista guddi farsamo oo ka kooban Dawlada Dhexe, Dawlad Goboleedyada iyo Gobolka Benaadir oo diyaariya qorsheyaasha xalka waara ee barakacayaasha.
3. In Dawlad Goboleedyada dalka, Gobolka Benaadir iyo hay’adaha caalamiga ah ay si wada jir ah uga shaqeeyaan ka mira-dhalinta qorshaha dib u dajinta barakacayaasha.
4. In la diyaariyo qorshe lagu wajahayo xaaladaha deg deg ah ee sababa barakicinta sida abaaraha iyo colaadaha.
5. Xoojin wada shaqeynta amni ee ka dhaxeysa laamaha ammaanka iyo dadka barakacayaasha ah si looga hortago falalka amni darrada ah.
6. In aan dadka barakacayaasha ah lagu khasbin in dib loogu celiyo deegaannadii ay horey uga yimaadeen.
7. In Maamulka iyo dawladduba ay xaq u leedahay dib ula soo laabashada dhulka dawliga ah ee barakacayaashu ay ku noolyihiin hadii ay u baahato in ay u isticmaasho danta guud.
Deegaanka Daarusalaam ee gobolka Mudug oo lagu qabtay rag ku hubaysan bambaano (dhegayso)
Duqa Cusub ee Magaaladda Boosaaso oo Maanta lagu soo dhaweyaay Boosaso (dhegayso/Sawiro)